xnxx: Hezvino zvinhu gumi zvinoitwa nevakadzi pamubhedha izvo varume vasingadi - teles
Ivo havazombofa vakatiudza, asi varume havafariri zviwitsi zvedu zvese mumubhedha ...
1. Patinopopota kwazvo kwazvo
Kuratidza mafaro, ehe. Munhu wedu anogona chete kubhururuka kuziva kuti isu tinokwira machira tichitenda kwaari. Kuungudza semhuka iri kubayiwa ... uh, blah. Vavakidzani hazvidi hazvo kuti vazive kuti tiri kuita mousers. Kunyanya zvakadaro nekuti murume wedu achashamisika kana tisiri simulating ...
2. Patinonyatsoda kukurukura mushure merudo
Kana kutsvoda, kurangarira nyika… muchidimbu. Mushure chiito, murume wedu pane anoda kutfuratira uye kusimuka. Hatifanirwe kuzvitora zvakashata, hazvina chekuita nesu. Zvepanyama… iye anoda kurara!
3. Patinonyanya kukwira
Kugadzira yakawandisa, zvitsitsinho zvakawandisa, yakawandisa mango, mimhanzi yakanyanya kumashure, makenduru, zvishandiso ... zvakawandisa. Murume wedu anoda kuita rudo kuti asaende anoona firimu rekushata kubva kuma80. Uye pamusoro pezvose, iye anoda kusiya kamuri kadiki kune izvo zvisingatarisirwe ...
4. Patinenge tichiri
Ita rudo nebhodhi rechingwa? Izvi handizvo chaizvo zvinodiwa nemurume wedu. Kunyangwe kana asingade kuita choreography yakajeka, angatoda kuti isu titore chikamu. Chinzvimbo chemamishinari chakakura… asi kwete nguva dzese.
5. Patinoridza condescension mune zvingangoitika
kutadza "Usanetseka. Izvo zvinogona kuitika kune chero munhu. »Phrase yekudzivirira nekukurumidza. Mune aya mamiriro ezvinhu, murume wedu haana hanya kuti zvinoitika kune vamwe. Nekuti ipapo, ikozvino, kwaari zvinoitika! Uye izvozvo hazvimufadze zvachose! Zvirinani kutora zororo kubva kune antics, usingaiti zvakawandisa, wobva watanga zvakare kumberi.
6. Patinokanganisa chiito pakati
Unoda pee? Kudzima mwenje? Unoda chigadzirwa chakakodzera? Foni iri kurira? Wedu murume haazi fan we padiki diki panguva yekuita. Haisi chinhu chake zvachose. Uye kumwe kwaanenge asiri kutadza. Kuti uite chikamu chakabudirira makumbo ari mumhepo, zviri nani kukanganwa zvese zvimwe uye ugare mubhurugwa ...
7. Kana iwe uchinyanyisa kutonga
Kunze kwekutonga chiri chinhu chake (uye mune iyi nyaya, isu tinoziva), murume wedu haadi kubiwa kubva kwaari zvachose. Kubata uye kutora zvirongwa, hongu. Kuve akaremara… zvakanaka kwete.
8. Patakamubvunza, panguva yechiitiko: "Ko dai isu taive nemwana?" "
Wedu murume akashuvira kuti afunge nezvazvo zvishoma asati abata pamuviri mwana. Kutaura chokwadi, chii. Izvo zvaizoisa shoma shoma kumanikidza paari. Nekuti kuve nekugadzira pfungwa dzako mumasekondi mashoma hazvisi nyore chaizvo… eh?
9. Patinodzima mwenje
Zviripachena kuti mwenje unodzima, murume wedu haazoone zvigumbu zvedu zvinobuda, makumbo edu akaveurwa zvakaipa uye Bridget Jones panties. Asi haazoone mazamu edu anoyevedza, isu vhudzi rekurota ... pamwe nemuviri wake wakabatana neyedu. Uye kuti anoda. Saka sei uchimutadzisa iyi show?
10. Kana tichitaura nezve chimwe chinhu
Aihwa. Kumubvunza kana iye achifunga zvekuisa iyo alarm yeawa mangwana kana iye ari parutivi rwegorasm haisi zano rakanaka. Senge kumuudza: "Huya uuye, mai vako vakadaidzwa" sezvaanoda norudo mazamu edu. Izvo hazvina basa. Kana murume wedu akaita rudo, anofunga… yekugadzira rudo.
Chinyorwa ichi chakatanga kuoneka pa: https://onvoitout.com/10-choses-que-les-femmes-font-au-lit-et-que-les-hommes-naiment-pas/
East Africa inosangana nekupinda mhashu dzemubhaibheri dze2020
Zuva rekuzvimiririra rakapambwa muCôte d'Ivoire